Directives | Central Bank of Myanmar
Bank Notes and Coins
Treasury Bill Auction Annoucement
Treasury Bond Price Caculator
Dec 11, 2017 05:26
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၄/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း (Bank Rate) ကို တစ်နှစ်လျှင် (၉.၅) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၁.၀) ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံလျှော့ချ၍ (၈.၅) ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်ကို (၂၄.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ အကျိုးသက်ရောက်မှု ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၀) ၏ အကျိုးသက်ရောက်မည့်ရက်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့အစား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့အဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၂၀) ကို (၁၃-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၀) ထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်ရည်ရွယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏အတိုးနှုန်း (Bank Rate) ကို တစ်နှစ်လျှင် (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းမှ (၉.၅) ရာခိုင်နှုန်းသို့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်ကို (၁၂.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်-
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၄/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ဘဏ်များက အကြွေးဝယ်ကတ် (Credit Card) ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် ချေးငွေပမာဏအပေါ် ကောက်ခံနိုင်သည့် အမြင့်ဆုံးအတိုးနှုန်းကို တစ်နှစ် လျှင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၂/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပါ အဓိကကျသည့်အကျိုးစီးပွားများရယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပုဒ်မ ၄၂၊ ၄၃၊ ၄၄၊ ၄၅၊ ၄၆၊ ၄၇ နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၄ တွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ အဓိကကျသည့်အကျိုးစီးပွားရယူခြင်း ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive No. (12/2019)
In exercise of the powers conferred under Sections 42, 43, 44, 45, 46 and 47 relating to Acquisition of Substantial Interest and Section 184 of the Financial Institutions Law (FI Law), the Central Bank of Myanmar (CBM), issues the Directive on Acquisition of Substantial Interest on March 25, 2019.
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၁/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပါ ဆက်နွှယ်သူများအား ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပုဒ်မ ၆၄ နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၄ တွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ဆက်နွှယ်သူများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive No. (11/2019)
In exercise of the powers conferred under Section 64 on related parties and Section 184 of the Financial Institutions Law (FI Law), the Central Bank of Myanmar (CBM), issues the Related Parties Directive on March 25, 2019.
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁၀/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပါ ဘဏ်၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပုဒ်မ ၈၈၊ ၈၉၊ ၉၀ နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၄ တွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ဘဏ်၏ပြင်ပစာရင်းစစ်များဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်က ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive No. (10/2019)
In exercise of the powers conferred under Sections 88, 89, 90 on External Auditors of Banks and Section 184 of the Financial Institutions Law (FI Law), the Central Bank of Myanmar (CBM), issues the Directive on External Auditors on March 25, 2019.
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၉/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပါ ဘဏ်၏ဒါရိုက်တာများနှင့်ပတ်သက်သည့် ပုဒ်မ ၇၃၊ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၈၀ နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၄ တွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ဘဏ်၏ဒါရိုက်တာများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive No. (9/2019)
In exercise of the powers conferred under Sections 73,74,75,76, 80 relating to Directors of Banks and Section 184 of the Financial Institutions Law (FI Law), the Central Bank of Myanmar (CBM), issues the Directive on Directors of Bank on March 25, 2019.
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၈/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပါ သင့်လျော်မှန်ကန်ခြင်းရှိမှုဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပုဒ်မ ၇၆ နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၄ တွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ သင့်လျော်မှန်ကန်ခြင်း ရှိမှုဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်များ အတွက် ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive No. (8/2019)
In exercise of the powers conferred under Section 76 on Fit and Proper Criteria and Section 184 of the Financial Institutions Law (FI Law), the Central Bank of Myanmar (CBM), issues the Directive on Fit and Proper Criteria on March 25, 2019.
အမှာစာ (၁/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားဘဏ်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများထံမှ အကျိုးတူရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု (Equity Investment) လက်ခံဆောင်ရွက်လိုပါက တင်ပြရန်ကိစ္စကို အမှာစာ(၁/၂၀၁၉) ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂၉-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၃/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေပါ မတည်ရင်းနှီးငွေ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပုဒ်မ ၃၄ နှင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၈၄ တွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြန်လည်ရရှိရန် ဦးစားပေးအဆင့်တွင်မရှိသည့် ကြွေးမြီများဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂၄-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive No. (3/2019)
In exercise of the powers conferred under Section 34 on maintenance of capital funds and Section 184 of the Financial Institutions Law (FI Law), the Central Bank of Myanmar (CBM) issues the Subordinated Debt Directive on January 24, 2019.
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ပြည်တွင်းဘဏ်များအား စုစုပေါင်းချေးငွေ (Total Loan Portfolio) ၏ ၅% ကို သက်တမ်း (၃) နှစ်ထက်ပိုသည့် အိမ်ရာချေးငွေ (Housing Loan) များ ထုတ်ချေးခွင့်ပြုခြင်း ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၁၅-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၉) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ဘဏ်များမှ ထုတ်ချေးသော ချေးငွေများအပေါ် ဘဏ်များမှ တောင်းခံနိုင်သည့် အတိုးနှုန်းများ (Lending Rates) ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၁၅-၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၆/၂၀၁၈) ထုတ်ပြန်ခြင်း
နိုင်ငံခြားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများအား ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ(Local Corporate) အတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများ တိုးချဲ့ခွင့်ပြုခြင်း ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၈-၁၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၈) ထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၇-၇-၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၈/၂၀၁၇)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပမာဏကြီးမားသောကြွေးမြီများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအရ ပမာဏကြီးမားသောကြွေးမြီများကို ကာလသတ်မှတ်ချက် ချေးငွေသက်တမ်းသုံးနှစ်အတွင်း လျှော့ချမည့်အစီအစဉ်အား တင်ပြရမည့်ရက်ကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၈-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၈) ထုတ်ပြန်ခြင်း
၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၇)၏ အပိုဒ် ၃(စ)(၁)အား ပြင်ဆင်သည့် ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၈-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ငွေကြေးလွယ်ကူမှုအချိုး တွက်ချက်သည့်ပုံစံအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
နိုင်ငံခြားဘဏ် ဘဏ်ခွဲများအား ပြည်တွင်းပို့ကုန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သူများအတွက် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည့် ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၈/၂၀၁၇) ထုတ်ပြန်ခြင်း
မိုဘိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း အပိုဒ် ၁၇(ဂ) အား ပြင်ဆင်သည့် ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၇/၂၀၁၇) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ ၇-၇-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ရရန်ပိုင်ခွင့်များ အမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် လျာထားခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂၄-၁၁-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive for all banks on the implementation of the Asset Classification and Provisioning Regulation
The Central Bank of Myanmar has issued the follow-up Directive (Directive No. 7/2017) on Asset Classification and Provisioning Regulation on November 24, 2017. The detailed Directive can be accessed here.
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်(၂၁/၂၀၁၅) ထုတ်ပြန်ခြင်း
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၁/၂၀၁၄) ပုဒ်မ ၆၉(ဂ) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ(ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၆/၂၀၁၃) ပုဒ်မ ၄၀ တွင် အပ်နှင်းထားသည့် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ ဘဏ်များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသို့ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူအပေါ် အလေးထားစိစစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Directive No. (21/2015)
In exercising the power set out in the Section 69(c) of the Anti-Money Laundering Law (Pyi Htaung Su Hluttaw Law No 11/2014) and Section 40 of the Central Bank of Myanmar Law (Pyi Htaung Su Hluttaw Law No.16/2013), the Central Bank of Myanmar issues the Directive on Customer Due Diligence related to the Anti-money Laundering and Counter Financing of Terrorism to the banks and financial institutions licensed and supervised by the CBM.
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ (ဏ) နှင့် ၉၁(ခ) တို့အရ မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
အီလက်ထရောနစ်ကတ်ဖြင့်ပေးချေမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်(၂/၂၀၁၂) ထုတ်ပြန်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၂ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ ပုဒ်မခွဲ(ဏ) အရလည်းကောင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုကျင့်သုံး၍ ဘဏ်နှင့်ငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်းများသည် အီလက်ထရောနစ်ကတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရန်အတွက် အီလက်ထရောနစ်ကတ်ဖြင့် ပေးချေမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က ၉-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
Second time Auction Result for 10.3.2020
Auction Result for 10.3.2020
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 10.3.2020
Auction Result for 6.3.2020
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 6.3.2020
Non-Bank Money Changers
MMK per USD - Date: 3rd April 2020
(WA market rate) 1,405.4
Interbank Market WA rate 1,407.2
Central Bank Rate 8.5%pa
Minimum Bank Deposit Rate 6.5%pa
2018-2019 First6Months
(October to March)